Shabakadda Amiirnuur – Page 269
Abuu Muscab “Majiro Wax Weerar Ah Oo Ka Dhacay Magaalada Jilib Warka Kasoo Yeeray Murtadiinta Waa Been”.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu beeniyay sheegasho been abuur ah oo kasoo yeertay mid kamida wasiirrada dowladda Federaalka Soomaaliya. Cabdi Raxmaan Yariisoow oo ah wasiirka warfaafinta ayaa maanta sheegay in howlgal ay ciidamadoodu ka sameeyeen gudaha degmada Jilib ay ku burburiyeen xarumo ciidan oo […]
Garoonka Diyaaradaha Iyo Xerada Xalane oo Maalintii Sadaxaad Bandow Ah.
Bandow socon doona illaa maalinta Axadda ayaa saaran garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo Xerada Xalane oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeye kuna yaallaan xarumaha Qaramada midoobay iyo shirkadaha calooshood u shaqeystayaasha ah. Tani waxay ka dambeysay kadib markii taliska Amisom uu maalintii Khamiisti soo saaray warqad uu ku […]
Saraakiil Ka Kala Tirsan DF iyo Puntland oo Lagu Dilay Afgooye Iyo Gaalkacyo.
Sarkaal ka tirsan DF ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho kadib markii ay weerar ku qaadeen rag hubeysan oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab. Ilo wareedyo ayaa sheegay in aanan la garan qaabka uu ku dhacay dilka, balse waxay xaqiijiyeen in mar qura la maqlay rasaas kadibna loo tagay isagoo geeriyooday, dadkii […]
Al-Shabaab oo Si Buuxda Ula Wareegay Degaanka Basra.
Ciidamo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab oo tiradoodu aad u badan tahay ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku haynta degaanka Basra oo dhaca inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye. Ciidamadii huwanta ahaa ee maalmahanba ku sugnaa ayaa isaga huleelay degaanka, waxaana durbadiiba gudaha u galay Al-Shabaab iyadoo dad […]
Dhageyso Falanqeyn Ku Saabsan Bixitaanka Amisom Iyo Kadib.
Diirada jimcaha oo ay ka qeybqaateen Aqoonyahan Maxamed Sheekh, Axmed Ibraahim iyo Nabad doon Maxamed Guuleed ayaa looga hadlay waxa ka dhalan kara ka bixitaanka Amisom ee Soomaaliya oo bilaabanaya dabayaaqada bisha soo socota. Diirada ayaa sidoo kale lagu soo qaatay aaraahda dhagaystayaasha ee ku aadan Mowduuca. Halkan Ka Dhageyso […]
Ballanqaadkii Lagu Boobay Baytul Maqdas Ee Balfoor oo 100 Jirsaday (Barnaamij Gaar ah)
Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waxay barnaamij gaar ah ka diyaarisay sida lagu boobay dhulka Muslimiinta ee Filastiin ee uu kamid yahay masjidka barakeysan ee Al-Aqsaa. Wuxuu Barnaamijku kasoo bilaabanayaa ballanqaadkii wasiirkii arimaha dibadda ee Ingiriiska Arthor Balfoor ee ahaa in Yahuuda uu siinayo dhul ay degaan islamarkaana dowlad ka dhistaan. […]
Degdeg: Khasaare Culus oo Ciidamo Huwan Ah Lagu Gaarsiiyay Nawaaxiga Basra.
Wararka ka imanaya degaanka Basra oo u dhaxeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan sadax weerar oo dhabba gal ah loo dhigay ciidamo isugu jira Mareykan iyo kuwa Soomaali ah oo la socday. Ilo wareedyo ayaa inoo xaqiijiyay in gaari gaashaaman ciidamada Mareykanka laga gubay iyadoo […]
Dhageyso Muxaadaro Kooban oo Muhim Ah Iyo Sheekh Dulyadeyn (Raximahullaah)
Aqristayaal/dhageystayaal, waxaad inooga barateen inaan jimco walba idiin soo gudbinno muxaadaro, waxaana todobaadkan idiin heynaa muxaadaro ka hadleysa Ballan qaadka uu Alle u yaboohay iney mu’miniintu guuleysanayaan, waxaana muxaadaran jeedinaya Sheekh Muxamad Dulyadeyn raximahullaah. https://f.top4top.net/m_679ge1fs1.mp3
Xarunta Ugu Weyn Amisom oo Lagu Soo Rogay Bandow 5 Maalmood Ah.
War qoraal ah oo maanta kasoo baxay midowga Afrika ayaa lagu sheegay in xerada Xalane ay xirnaan doonto mudd shan maalmood ah iyadoo dhaqdhaqaaqa loo diiday saraakiisha Qaramada midoobay iyo kuwa Amisom. Bandowgan ayaa ka billaabanaya maanta oo ah Khamiis-9- Novmber, wuxuuna ku egyahay 13; November 9, 2017. Sida lagu […]
Degdeg: 3 Sarkaal oo Ka Tirsan Nabad Sugidda oo Lagu Dilay Muqdisho.
War degdeg ah oo goor dhow kusoo dhaxay xaruntan war qabadka ee shabakadda Amiirnuur.com ayaa waxa uu sheegayaa in 3 sarkaal oo ka tirsan DF lagu dilay weerar qarax loo adeegsaday oo ka dhacay degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in saraakiishan oo kamid ahaa Nabad sugidda […]